Pane munhu anogona kuve akabudirira muTexx mutengesi? | FXCC
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - forex basics nyaya - Pane munhu anogona kuve akabudirira muTexx mutengesi?
Pane munhu anogona kuve akabudirira muTexx mutengesi?
Pasina mubvunzo vatengesi vanobudirira Vatengesi veExx vanouya mumamiriro ose uye masimba, kubva kumativi ose epasi. Vamwe vanotora basa racho nokukurumidza, vamwe vanotora nguva refu, vamwe vanozviita nguva, dzimwe nguva yakazara, vamwe vane ruzivo kuti vave nenguva yekuzvitsaurira kune chinetso chakaoma kwazvo, vamwe havaiti.
Ndiyo pfungwa yekupedzisira iyo yatinoda kuisa pfungwa pamusoro payo, sezvo inofamba muchiso cheuchenjeri hwakagamuchirwa kuti pane imwe tarenda isina kufanirwa, yakasiyana-siyana inobatanidzwa mukutengesa, apo chokwadi ndechekuti tarenda ratinogona kushamwaridzana nekutengesa kubudirira haisi ' t chaizvo tarenda zvachose. Vazhinji vedu vachagumburwa pane zvekutengesa nengozi, pane kugadzira. Somuenzaniso, pane kuve nekukwikwidzana kukuru kwekutengeserana kwekutengesa forex, kubvira apo kuwedzera kwekuda kwekuda kwekuita kwakava tsika, kubva ku2008 kuenda mberi.
Tinonyengedzwa nekamuri yekutengeserana uye nzvimbo dzekutengeserana pasi dzakapiwa nemichina yakawanda pamusoro pekutengesa; vanhu vaduku, masheji akavharidzirwa, mafoni maviri ari pasi pose (rimwe rinotsigira nzeve imwe neimwe), sezvo vari kutengesa "kutenga, kutengesa" mirayiridzo kune vamwe vavo. Mufananidzo wakadaro uri mu musamuziyamu wekufambisa unyanzvi, sezvo ichinyamudiki chiduku chebhizimisi rebhizimisi, chero chipi zvacho, icho chichiri kuitwa nenzira iyo. Iko tarenda chaiyo ikozvino iri mune zvekugadzira zvemari, sezvo pasina maitiro ezvokutengeserana ekutengeserana nemisika inoburitsa chero zviitiko zvenguva refu zvisingaiti, pane zvatinogona kuvaka mari uye remangwana.
Pamusoro pe80% yeWall Street mutengesi wekutengesa iko zvino inoshandiswa nekugadziriswa, uye chikamu chikuru cheicho icho chinoitwa munzvimbo yezvinonzi HFT, yakakwirira yekutengeserana, zviyero zvakafanana maererano nehuwandu hwekutengeserana. Kana pane tarenda ripi rinobatanidzwa mukutengesa riri nemitemo yemasvomhu uye yefizikiki inonyora uye inofunga zvirongwa zvokutengeserana, haisi mutengesi wekunyora uyo ane hunch iyo EUR / USD inogona kusimuka, zvichienderana nekubatanidzwa kwemaitiro emagetsi uye huchauya hukuru hwemashoko ehurumende.
Saka, sezvatinodzokera kumubvunzo wepakutanga; "Ko munhu angava mutengesi anobudirira here?" Hungu mhinduro, kana vane nguva. Nguva ingangodaro (imwe kunze kwenyaya yakananga yemari), iyo inonyanya kukosha iyo inogona kukanganisa kubudirira kwedu.
Sezvakambotaurwa kakawanda, haudi mari yakawanda kuti utange kutengesa, zvirokwazvo (kutanga) zvakanakisisa kana iwe usingaiti mari yako yakawanda mumari yako yekutanga. Mumazuva okutanga tinoda kuona kudzoka, kungodzoka zvishoma pamari yedu yekutsvaga (ROI) tisati tawedzera. Kana tikakwanisa kujekesa 1% kubudirira kwevhiki, gore re50% ROI pagore rekukura kwekambani yedu duku yebhizimisi, iyo inogona kuzarurirwa zvishoma se $ 500, tinokwanisa ikozvino tine chivimbo chekuisa mari yakawanda munhoroondo yedu nekutengeserana mijenya.
Zvisinei, kana tisingakwanisi nguva yakakwana, tingati tive nekugadzira sei unyanzvi hunodiwa kuti tive vatengesi vanobudirira? Uri kuwana nguva yekutengesa zvirokwazvo unyanzvi husati hwagadziriswa uye husingazivikanwi here? Zvichida. Inoda humwe hutano hwehupenyu hukuru hwatinowanzoregeredza, zvakadai; sangano, kuranga, kudzokorora, unyanzvi hatisingave tiine ushamwari nekutengesa patinotanga kuutora semukana.